बजेट Achives| Page2of 37
राज्यकोषमा झण्डै दुई खर्ब मौज्दात, तर अर्थमन्त्री भन्छन्- पैसो सकियो, कसरी देश चलाउने ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा सरकारको आयको तुलनामा खर्च धेरै हुँदा सरकारलाई भुक्तानीमै समस्या रहेको बताएपछि ‘सरकारको ढुकुटी रित्तिएकै हो ? सरकार टाट पल्टिएकै हो ? भन्ने चर्चा सुरु भएका छन् । सरकारको मासिक अनिवार्य दायित्व ४० अर्ब रुपियाँ रहेको, तर राजस्व १५ …
काठमाडौं महानगरपालिकाले करदातालाई सहुलियत दिने, के के छ नीति कार्यक्रममा ?
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वभरि फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित करदातालाई विशेष सहुलियत दिने भएको छ । कामपाद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबाट प्रभावित करदातालाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्थ उल्लेख छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नीति तथा कार्यक्रम …
प्रदेश १, २ र सुदूरपश्चिमको यस्तो आयो बजेट, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौँ । असार १ गते सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यस्तो आयो ३ वटा प्रदेशको बजेट: प्रदेश नंं. १ मा ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक प्रदेश नं. १ सरकारले आर्थिक …
विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेशहरुले साँसदहरुको तजबिजीमा खर्चका लागि बजेट छुट्टाए
काठमाडौँ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारहरूको बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा उल्लेख्य रकम छुट्याइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि छुट्टै कोष बनाई बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यअनुसार नयाँ योजनालाई …
गण्डकी प्रदेशको बजेट रु ३४ अर्ब ८४ करोड, चालू आवको भन्दा रु २ अर्ब ७० करोड बढी
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा रु २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ६८ हजार बढी हो । गण्डकी प्रदेशसभाको …
वाग्मती प्रदेशको बजेट रु ५१ अर्बः मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता
हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कूल रु ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आज अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै रु …
प्रदेश ५ को बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड, कोरोना रोक्न एक अर्ब, भौतिक पूर्वाधारतर्फ १५ अर्ब
रूपन्देही । प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख र …
कर्णालीले ल्यायो ३३ अर्बको बजेट, महामारी रोकथाम र रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि ३३ अर्ब ७४ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । यस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसअनुसार पुँजीगततर्फ १९ अर्ब छ करोड र (५७ प्रतिशत), चालुतर्फ ११ अर्ब …
हामी राज्यको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लाग्यौंः अर्थमन्त्री
काठमाडौं। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्व संकलन नहुँदा खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उनले दैनिक आम्दानीबाट सरकारलाई राज्य सञ्चालनको खर्च धान्न नसक्ने कठिन भइसकेको बताएका हुन् । अहिले राज्य संचालनका लागि मासिक ४० अर्ब आवश्यक पर्ने भए …
असार १ गते बागमती प्रदेशको बजेट आउने, प्राथमिकता पर्दैछन् यी कार्यक्रम
हेटौँडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । आगामी असार १ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा लकडाउनका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने, कृषि उत्पादन बढाउने तथा उद्यामशीलता वृद्धि गर्नेखालका योजना समेटेर बजेट ल्याउन लागिएको …
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकमा उक्त विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका …
विकासतिर अघि बढ्न लागेका के थियौं, कोरोनाले रोकिहाल्योः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासतर्फ अघि बढ्न लागेको बेला कोरोना (कोभिड १९) महामारीले रोकेको बताएका छन् । मंगलबार संसदमा बोल्ने क्रममा उनले भने, हामी भर्खर विकासको बाटोतर्फ अघि बढ्दे थियौं, हामीले आधार बर्ष भन्यौं, त्यसपछि अगाडि बढ्ने बर्ष भन्यौं, तर यसमा अघि …